Askari ka tirsan DF oo ku hanjabay inuu isku hor gubi doono ilinka hore ee Villa Somalia +COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Askari ka tirsan DF oo ku hanjabay inuu isku hor gubi doono ilinka hore ee Villa Somalia +COD
Waxaa sii kordhaaya ciidamada dowlada Federaalka ee ka cabanaaya xuquuq la’aanta tan iyo markii la doortay Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaaho.
Mid kamid ah ciidamada Xoogga oo magaciisa ka gaabsaday ayaa si xamaasadeysan uga hadlay dhibaatada ay ku qabaan ciidanimada dowlada, waxa uuna wacad ku maray inuu isku hor gubi doono albaabka hore ee Villa Somalia.
”Waxaan ballan ku qaadaya inaan isku hor gubo ilinka hore ee Villa Somalia ama daljirka daahsoon maadaama aan heysan nolol”
Mar uu wareysi siinaayay Idaacada KNN ee magaalada Muqdisho ayuu sheegay inuusan mushaar arag 13 Bil, isla markaana qoyskiisa laga eryay guryihii ay ku jireen, halka ay soo food saartay nolol xumo.
Waxa uu Askarigaasi sheegay in maleeshiyaadka Al-shabaab lagu dacweeyay qoyskiisa isla markaana la xiray aabihii dhalay, sababo la xiriira lacago deen ah oo uu ku dabaray carruurta uu dhalay wiilkiisa Askariga ah.
Waxa uu tilmaamay in laga goostay lacago yar yar oo uu ka qaadan jiray walaalihii kadib markii loo raacay ballanqaadkii uu jeediyay Madaxweyne Farmaajo ee ahaa inuu bixin doono xuquuqda ciidanka oo joogta ah.
”Dadkii aan ka heli jiray lacagaha wey iga jarteen maadaama uu Madaxweynuhu yiri waxaan bixinayaa xuquuq joogta ah”
Waxa uu sheegay inuu burburay Qaranka sababo la xiriira musuq maasuqa lagu hayo xuquuqda ciidamada iyo tan shaqaalaha kale ee dowlada.